အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: ပဋ္ဌာန်းဘာသာပြန် (၁)
ပဋ္ဌာန်း(၂၄)ပစ္စည်း နိဒ္ဒေသကို ညစဉ်ပူဇော်နေတာ တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပီ။ ပျက်တဲ့ရက်လည်းပျက်တာပေါ့လေ။ ပူဇော်ယင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသိချင်လာတယ်။ စာအုပ်တွေရှာဖတ်တော့လည်း ကိုယ်သိချင်သလိုမဟုတ်ပဲ အကျယ် ချဲ့ရှင်းတာတွေပဲတွေ့ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒေသကို ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မွန်(မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ) ရောက်လာပြီး အဘိဓမ္မာ(၁၄)ရက်သင်တန်းပို့ချပါတယ်။ အခန်း(၈)ပစ္စည်းပိုင်းကို သင်တဲ့အခါ ပဋ္ဌာန်းကိုသင်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကိုယ်သိချင်တဲ့အရာတွေကို အားလုံးနီးပါးသိခွင့်ရပါတော့တယ်။ သိတဲ့အတွက် ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရာမှာ ပိုပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လိုပဲ သိချင်တဲ့သူများ ရကြပါစေချင်းငှာ ဆရာကြီးအကူအညီနဲ့ ပစ္စယနိဒ္ဒေသကို လိုရင်းတိုရှင်း အကျဉ်းဘာသာပြန်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းများရှိမှာသေချာပါတယ်။ Online မှ ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိများ အမှားများတွေ့က Comment မှာထောက်ပြကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ထောက်ပြတဲ့ အမှားတွေကို အမြဲ Update လုပ်ပေးပါ့မယ်။
ဟေတုပစ္စယော ၊ အာရမ္မဏပစ္စယော
အဓိပတိပစ္စယော ၊ အနန္တရပစ္စယော
သမနန္တရပစ္စယော ၊ သဟဇာတပစ္စယော
အညမညပစ္စယော ၊ နိဿယပစ္စယော
ဥပနိဿယပစ္စယော ၊ ပုရေဇာတပစ္စယော
ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော ၊ အာသေ၀နပစ္စယော
ကမ္မပစ္စယော ၊ ၀ိပါကပစ္စယော
အာဟာရပစ္စယော ၊ ဣန္ဒြိယပစ္စယော
ဈာနပစ္စယော ၊ မဂ္ဂပစ္စယော
သမ္ပယုတ္တပစ္စယော ၊ ၀ိပယုတ္တပစ္စယော
အတ္ထိပစ္စယော ၊ နတ္ထိပစ္စယော
၀ိဂတပစ္စယော ၊ အ၀ိဂတပစ္စယောတိ။
၁။ ဟေတုပစ္စယောတိ - ဟိတ်(၆)ပါးအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုပုံ
(လောဘဟိတ်၊ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ်၊ အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်)
ဟေတူ ဟိတ်(၆)ပါးသည်၊ ဟေတုသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ ၄င်းဟိတ်တို့နှင့်ယှဉ်ဖက် (စိတ်စေတသိက်)တရားတို့ကို၎င်း၊ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ထို(စိတ်စေတသိက်)တရားတို့ဖြစ်စေသော ရုပ်တရား(စိတ္တဇရုပ်)ကို၎င်း ဟေတုပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဟေတုပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
၂။ အာရမ္မဏပစ္စယောတိ - ဆွဲတွယ်ထောက်တည်ရန်အလို့ငှာ အာရုံများကျေးဇူးပြုပုံ
ရူပါယတနံ အဆင်းသည်၊ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ မြင်သိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သဒ္ဒါယတနံ အသံသည်၊ သောတ၀ိညာဏဓာတုယာ ကြားသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုကြားသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဂန္ဓာယတနံ အနံ့သည်၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုနံသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရသာယတနံ အရသာသည်၊ ဇိဝှာဝိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုစားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ အတွေ့အထိသည်၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုထိသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရူပါယတနံ အဆင်း၊ သဒ္ဒါယတနံ အသံ၊ ဂန္ဓာယတနံ အနံ့၊ ရသာယတနံ အရသာ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ အတွေ့အထိတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓါတ်(၃)ပါးနှင့် တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ် (၃)ပါးနှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ၊ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သဗ္ဗေဓမ္မာ အလုံးစုံသောစိတ်စေတသိက်တရားတို့သည် မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ် (၇၆)ပါးနှင့် တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဝိညာဏ်(၇၆)ပါးနှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ယံ ယံ ဓမ္မံ အာရဗ္ဘ အကြင် အကြင် တရားတို့ကို ဆွဲတွယ်၍၊ ယေယေ ဓမ္မာ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ ထိုထိုစိတ်စေတသိက်တရားတို့ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ တေ တေ ဓမ္မာ ရှေ့ ရှေ့ တရားတို့က ၊ တေသံ တေသံ ဓမ္မာနံ နောက် နောက် တရားတို့ကို အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓါတ်(၃)ပါး = ပဉ္စဒွါရ၀ဇ္ဇန်းစိတ်နှင့် သမ္ပဋိစ္ဆိုန်းဒွေ
၃။ အဓိပတိပစ္စယောတိ - အကြီးအကဲအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုပုံ
ဆန္ဒာဓိပတိ ဆန္ဒဟူသောအကြီးအကဲတရားသည်၊ ဆန္ဒသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ ဆန္ဒနှင့် တစ်ပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်ကြသောစိ တ်စေတသိက်တရားတို့ကို၎င်း၊ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ထိုစိတ်စေတသိက်တို့ဖြစ်စေသာ စိတ္တဇရုပ်ကို၎င်း၊ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
၀ီရိယာဓိပတိ ၀ီရိယဟူသောအကြီးအကဲတရားသည်၊ ၀ီရိယသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ ၀ီရိယနှင့် တစ်ပေါင်းတည်းယှဉ်ဖြစ်ကြသောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို၎င်း၊ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ထိုစိတ်စေတသိက်တို့ကဖြစ်စေသော စိတ္တဇရုပ်ကို၎င်း၊ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
စိတ္တာဓိပတိ စိတ်ဟူသောအကြီးအကဲတရားသည်၊ စိတ္တသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ စိတ်နှင့်တစ်ပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်ကြသောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို၎င်း၊ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ထိုစိတ်စေတသိက် တို့ဖြစ်စေသော စိတ္တဇရုပ်ကို၎င်း၊ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၀ီမံသာဓိပတိ ပညာဟူသောအကြီးအကဲတရားသည်၊ ၀ီမံသသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ ပညာနှင့် တစ်ပေါင်းတည်း ယှဉ်ဖြစ်ကြသော စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို၎င်း၊ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ ထိုစိတ်စေတသိက် တို့ဖြစ်စေသော စိတ္တဇရုပ်ကို၎င်း၊ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ယံ ယံ ဓမ္မံ ဂရုံ ကတွာ အကြင် အကြင် တရားတို့ကို အလေးအမြတ်ပြု၍ ၊ ယေ ယေ ဓမ္မာ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ ထိုထိုစိတ်စေတသိက်တရားတို့ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ တေ တေ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ တရားတို့က တေသံ တေသံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက်ဖြစ်သောတရားတို့ကို ၊ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၄။ အနန္တရပစ္စယောတိ - အခြားမရှိကျေးဇူးပြုပုံ
စက္ခုဝိညာဏဓာတု မြင်သိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓါတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
သောတ၀ိညာဏဓာတု ကြားသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုကြားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓါတ် (သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သံမ္ပဋိစ္ဆိုင်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို အနန္တရပစ္စယေနပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဃာန၀ိညာဏဓာတု နံသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုနံသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သံမ္ပဋိစ္ဆိုင်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဇိဝှါဝိညာဏဓာတု စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုစားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ကာယ၀ိညာဏဓာတု ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုထိသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေနပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သံမ္ပဋိစ္ဆိုင်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သော စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို အနန္တရပစ္စယေနပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေနပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ယေသံ ယေသံ ဓမ္မာနံ အနန္တရာ အကြင် အကြင် တရားတို့ ချုပ်ပြီးအခြားမရှိပဲ ယေ ယေ ဓမ္မာ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ၊ ထို ထို စိတ်စေတသိက်တရားတို့ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ တေ တေ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့တရားတို့သည်၊ တေသံ တေသံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် တရားတို့ကို အနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၅။ သမနန္တရပစ္စယောတိ - ကောင်းစွာအခြားမရှိကျေးဇူးပြုပုံ
စက္ခုဝိညာဏဓာတု မြင်သိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေနပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သံမ္ပဋိစ္ဆိုင်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သော စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
သောတ၀ိညာဏဓာတု ကြားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုကြားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ် (သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
မနောဓာတု မနောဓါတ်(သံမ္ပဋိစ္ဆိုင်း)နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုမနောဓါတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့သည်၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဝိညာဏဓါတ်(သန္တီရဏ)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထို(သန္တီရဏ)နှင့်ယှဉ်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဃာန၀ိညာဏဓာတု နံသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုနံသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက် တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို ၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဇိဝှါဝိညာဏဓာတု စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုစားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ကာယ၀ိညာဏဓာတု ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာစ ဓမ္မာ ထိုထိသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက် တရားတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓာတ်(သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း)နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ်နှင့်ယှဉ်ဖက် စိတ်စေတသိက်တို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ယေသံ ယေသံ ဓမ္မာနံ သမနန္တရာ အကြင် အကြင် တရားတို့ ချုပ်ပြီးကောင်းစွာအခြားမရှိပဲ ယေ ယေ ဓမ္မာ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ၊ ထို ထို စိတ်စေတသိက်တရားတို့ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ တေ တေ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့တရားတို့သည်၊ တေသံ တေသံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် တရားတို့ကို သမနန္တရပစ္စယေန ပစ္စယော။ သမနန္တရပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၆။ သဟဇာတပစ္စယောတိ - အတူတကွဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုပုံ
စတ္တာရော ခန္ဓာ အရူပိနော ရုပ်မဟုတ်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည်၊ အညမညံ အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စတ္တာရော မဟာဘူတာ မဟာဘုတ်လေးပါး(ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊တေဇော၊၀ါယော) တို့သည် ၊ အညမညံ အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သြက္ကန္တိက္ခဏေ နာမရူပံ ပဋိသန္ဓေအခါ၌ နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည်၊ အညမညံ အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ စိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ စိတ်ကဖြစ်စေသောရုပ်(စိတ္တဇရုပ်)တို့ကို၊ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
မဟာဘူတာ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်၊ ဥပါဒါရူပါနံ ဥပါဒါရုပ်တို့ကို ၊ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရူပိနော ဓမ္မာ ရုပ်တရားသည်၊ အရူပီနံ ဓမ္မာနံ နာမ်တရားကို၊ ကိဉ္စိကာလေ အချို့သောအခါ၌ ၊ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော၊ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကိဉ္စိကာလေ အချို့သောအခါ၌၊ န သဟဇာတ ပစ္စယေနပစ္စယော။ သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုမပြုပါ။
၇။ အညမညပစ္စယောတိ - အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုပုံ
စတ္တာရော ခန္ဓာ အရူပိနော ရုပ်မဟုတ်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည် တစ်ခုကိုတစ်ခု၊ အညမည ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စတ္တာရော မဟာဘူတာ မဟာဘုတ်လေးပါး(ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊တေဇော၊၀ါယော) တို့သည် တစ်ခုကိုတစ်ခု၊ အညမည ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သြက္ကန္တိက္ခဏေ နာမရူပံ ပဋိသန္ဓေအခါ၌ နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ အညမည ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
၈။ နိဿယပစ္စယောတိ - မှီရာအဖြစ်ကျေးဇူးပြုပုံ
စတ္တာရော ခန္ဓာ အရူပိနော ရုပ်မဟုတ်သော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့သည်၊ အညမညံ အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော။ နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စတ္တာရော မဟာဘူတာ မဟာဘုတ်လေးပါး(ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊တေဇော၊၀ါယော) တို့သည် ၊ အညမညံ အပြန်အလှန် တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော။ နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သြက္ကန္တိက္ခဏေ နာမရူပံ ပဋိသန္ဓေအခါ၌ နာမ်နှင့်ရုပ်တို့သည်၊ အညမညံ အပြန်အလှန်တစ်ခုကိုတစ်ခု ၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော။ နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ စိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ စိတ်ကဖြစ်စေသော ရုပ်(စိတ္တဇရုပ်)တို့ကို၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော။ နိဿယပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
မဟာဘူတာ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်၊ ဥပါဒါရူပါနံ ဥပါဒါရုပ် တို့ကို ၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော။ နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
စက္ခာယတနံ စက္ခုပသာဒသည်၊ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ မြင်သိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ၊ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော၊ နိဿသပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သောတာယတနံ သောတပသာဒသည်၊ သောတ၀ိညာဏဓာတုယာ ကြားသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုကြားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက် တရားတို့ကို နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော၊ နိဿသပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဃာနာယတနံ ဃာနပသာဒသည်၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုနံသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ နိဿယပစ္စယေနပစ္စယော၊ နိဿသပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါပသာဒသည်၊ ဇိဝှာဝိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုစားသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော၊ နိဿသပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကာယာယတနံ ကာယပသာဒသည်၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုထိသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ နိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော၊ နိဿသပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ယံ ရူပံ နိဿာယ အကြင် ရုပ်(ဟဒယ၀တ္ထု)ကို အမှီပြု၍ ၊ မနောဓာတု စ မနောဓါတ်(၃)ပါးနှင့်၊ မနောဝိညာဏဓာတုစ ၀တ္တန္တိ မနောဓါတ်(၇၆)ပါးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တံ ရူပံ ထို(ဟဒယ၀တ္ထု)ရုပ်သည်၊ မနောဓာတုယာစ မနောဓါတ်(၃)ပါး၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာစ မနောဓါတ်(၇၆)ပါးနှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ၄င်းတို့နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ နိဿယ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ နိဿသပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
၉။ ဥပနိဿယပစ္စယောတိ - အားကြီးသောမှီရာအဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုပုံ
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ်တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့ကို၊ ကေသဉ္စိ အချို့သောအခါ၌၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ ကေသဉ္စိ အချို့သောအခါ၌၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအဗျာကတ တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ ဖြစ်သောအဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက် ဖြစ်သောအကုသိုလ် တရားတို့ကို၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဥတုဘောဇနမ္ပိ ရာသီဥတုနှင့်စားဖွယ်ဘောဇဉ်တို့သည်၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ပုဂ္ဂလောပိ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ မိဘ၊ဆရာ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့သည် ၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
သေနာသနမ္ပိ အဆောက်အဦ၊ အရိပ်၊ နေစရာ တို့သည် ၊ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယောတိ - ရှေ့ဖြစ်၍ နောက်ဖြစ်သောတရားကို ကျေးဇူးပြုပုံ
စက္ခာယတနံ စက္ခုပသာဒ(မျက်စိအကြည်ရုပ်)သည် စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ မြင်သိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက် တရားတို့ကို ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သောတယတနံ သောတပသာဒ(နားအကြည်ရုပ်)သည်၊ သောတ၀ိညာဏဓာတုယာ ကြားသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုကြားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက် တရားတို့ကို ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဃာနာယတနံ ဃာနပသာဒ(နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်)သည်၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုနံသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါပသာဒ(လျှာအကြည်ရုပ်)သည်၊ ဇိဝှာဝိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုစားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကာယာယတနံ ကာယပသာဒ(ကိုယ်အကြည်ရုပ်)သည်၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုထိသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရူပါယတနံ အဆင်းသည်၊ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ မြင်သိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
သဒ္ဒါယတနံ အသံသည်၊ သောတ၀ိညာဏဓာတုယာ ကြားသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုကြားသိစိတ်နှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဂန္ဓာယတနံ အနံ့သည်၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ်နှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုနံသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရသာယတနံ အရသာသည်၊ ဇိဝှာဝိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုစားသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ အတွေ့အထိသည်၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ်နှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုထိသိစိတ်နှင့်ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ရူပါယတနံ အဆင်း၊ သဒ္ဒါယတနံ အသံ၊ ဂန္ဓာယတနံ အနံ့၊ ရသာယတနံ အရသာ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ အတွေ့အထိတို့သည်၊ မနောဓာတုယာ မနောဓါတ်(၃)ပါးနှင့် တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ထိုမနောဓါတ် (၃)ပါးနှင့် ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ယံ ရူပံ နိဿာယ အကြင် ရုပ်(ဟဒယ၀တ္ထု)ကို အမှီပြု၍ ၊ မနောဓာတု စ မနောဓါတ်(၃)ပါးနှင့်၊ မနောဝိညာဏဓာတု စ ၀တ္တန္တိ မနောဓါတ်(၇၆)ပါးတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တံ ရူပံ ထို(ဟဒယ၀တ္ထု)ရုပ်သည်၊ မနောဓာတုယာစ မနောဓါတ်(၃)ပါး ၊ မနောဝိညာဏဓာတုယာစ မနောဓါတ်(၇၆)ပါးနှင့်၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ၄င်းတို့နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ မနောဝိညာဏဓာတုယာ မနောဓါတ်(၇၆)ပါးနှင့် ၊ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ၄င်းတို့နှင့် ယှဉ်ဖက်စိတ်စေတသိက်တရားတို့ကို ၊ ကိဉ္စိကာလေ အချို့သောအခါ၌၊ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကိဉ္စိကာလေ အချို့သောအခါ၌၊ န ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော၊ ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးမပြုပါ။
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယောတိ - နောက်မှဖြစ်၍ ရှေ့ဖြစ်သောတရားကိုကျေးဇူးပြုပုံ
ပစ္ဆာဇာတာ နောက်မှဖြစ်သော ၊ စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ စိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်၊ ပုရေဇာတဿ ရှေ့၌ဖြစ်ကြသော၊ ဣမဿ ကာယဿ ဤရုပ်ဝတ္ထုအစုကို ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၁၂။ အာသေ၀နပစ္စယောတိ - အထုံအဟုန်အဖြစ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုပုံ
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက်ဖြစ်သော ကုသိုလ်တရားတို့ကို၊ အာသေ၀န ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာသေ၀နပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ဖြစ်သော အကုသိုလ်တရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ အကုသလာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက်ဖြစ်သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို၊ အာသေ၀န ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာသေ၀နပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကြိယာဗျာကတာ ဓမ္မာ ရှေ့ရှေ့ဖြစ်သော ကြိယာ အဗျာကတတရားတို့သည်၊ ပစ္ဆိမာနံ ပစ္ဆိမာနံ ကြိယာဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ နောက်နောက်ဖြစ်သော ကြိယာ အဗျာကတတရားတို့ကို၊ အာသေ၀န ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာသေ၀နပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
posted by အတ္တ @ May 29, 20115Comments
At May 29, 2011 at 3:37 AM , Anonymous said...
At May 29, 2011 at 2:14 PM , curious-egg said...
Thanks you so much. That's help me to know the definition of Pa-Htan. Really appreciate it.
At May 29, 2011 at 7:31 PM , Anonymous said...
Thank you very much... I am also looking for the actual meaning of Pa Htan for so long already. Thanks for sharing and appreciate it.
At June 9, 2011 at 2:09 PM , Crystal said...
At November 14, 2013 at 7:39 AM , Anonymous said...